Hakuchazovazve neJava kubva kuOracle muUbuntu | Kubva kuLinux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Kugoverwa, GNU / Linux, Noticias, Kuronga
Kubva pane saiti iri munyika yangu ndakaverenga idzi nhau, dzandinogovana newe:
Kwete kare kare Oracle akavhara rezinesi izvo zvakatendera mapato matatu kugovera avo Java makomputa zvakasununguka.
Java mapakeji eUbuntu anowanikwa aine mazita zuva-java6- *. Kuvharwa kwaOracle kwakakonzera nyaya yeUbuntu kuti vhezheni yekupedzisira yavaive nayo yeJDK yakaendeswa kune vamwe vavo repos, asi kubva panguva iyoyo, Nyamavhuvhu-2011, ivo havana kukwanisa kugadzirisa iyo Java vhezheni mune yavo repos zvakare.
Zvinoitika kuti Oracle nguva pfupi yadarika yakazivisa huwandu hwekukuvadzwa kweJava, iri kushandiswa kazhinji mazuva ano nevanorwisa, uye aya matambudziko akakomba aripo mushanduro yeJava iri munzvimbo dzeUbuntu mumapakeji zuva-java6. Asi sezvo Canonical isingakwanise kushambadzira zviri pamutemo izvo zvemapakeji uye nekuda kwayo kufarira kuchengetedza kuchengetedzeka kwevashandisi vayo, yakafunga kubvisa mapakeji aya kubva kuzororo rayo zvachose, ichisiya mushandisi imwe nzira yekushandisa iyo openjdk, yemahara Java vhezheni.
Nekudaro Canonical ichaisa isina chinhu sun-java6 mapakeji muUbuntu repos, izvo zvinokonzeresa vashandisi pavanosimudzira kuti varasike vhezheni yeOracle Java yavainge vamboisaNaizvozvo, ivo vanofanirwa kuenda nekukurumidza sezvinobvira kuOpenJDK iri muUbuntu repos. Izvo hazvisati zvazivikanwa nezuva razvichaitika asi iko shanduko ichaitika munguva pfupi iri kutevera.
Zano rangu ndere kushandisa OpenJDK uye kana iwe ukavimba chete neOracle mabhinari wobva waodhaunura kubva kune yavo saiti yepamutemo.
Chiziviso cheCanonical inogona kuverengwa pane iyi link. Zvisinei hazvo ndinovasiira mazwi chaiwo:
Iyo Canonical partner Archive parizvino ine Oracle's Sun Java JDK mapakeji (sun-java6) yeUbuntu 10.04 LTS, Ubuntu 10.10 uye Ubuntu 11.04. Kubva muna Nyamavhuvhu 24th 2011, hatisisina mvumo yekugovera patsva mapakeji eJava sezvo Oracle yatora basa re "Operating System Distributor License yeJava"  . Oracle yakaburitsa kuraira nezve nyaya dzekuchengetedza mushanduro yeJava yatiinayo pari zvino mudura repamoyo . Dzimwe dzenyaya idzi pari zvino dziri kushandiswa musango. Nekuda kwekuomarara kwenjodzi yekuchengetedza, Canonical iri kuburitsa pakarepo yekuchengetedza kweiyo Sun JDK browser plugin iyo inodzima iyo plugin pane ese michina. Izvi zvinoderedza njodzi yevashandisi kubva kune mawebhusaiti ane hutsinye anoshandisa iyo isina njodzi vhezheni yeZuva JDK. Munguva pfupi iripedyo (chaiyo zuva TBD), Canonical ichabvisa ese Sun JDK mapakeji kubva kune Partner dura. Izvi zvichaitwa nekusundira mapakeji asina chinhu kudura, kuitira kuti Zuva JDK ribviswe kubva kune vese vashandisi michina kana ivo vaita software yekuvandudza. Vashandisi vemapakeji aya vasina kutamira kune imwe mhinduro vanozoona kukundikana mushure mekugadziriswa kwepakeji vabvisa Oracle Java kubva muchirongwa. Kana iwe urikushandisa izvozvi Oracle Java mapakeji kubva kuneako mudura, iwe une sarudzo mbiri: 1- Isa iyo OpenJDK mapakeji ayo anowanikwa mune hombe Ubuntu Archive. (icedtea6-plugin yebrowser plugin, openjdk-6-jdk kana openjdk-6-jre yemuchina chaiwo) 2- Nemaoko isa Oracle's Java software kubva pawebhusaiti yavo . Kuti uwane rumwe ruzivo, ndokumbira ubvunze peji rewiki pane iyi nyaya  Tinokumbira ruregerero kune chero kusagadzikana kunogona kukonzerwa, uye ndinokutendai nekunzwisisa kwenyu.  - http://jdk-distros.java.net/
[piri] - http://robilad.livejournal.com/90792.html
[piri] - http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/javacpuoct2011-443431.html
[piri] - http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
[piri] - https://wiki.ubuntu.com/LucidLynx/ReleaseNotes/Java6Transition
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Hakuchazovazve neJava kubva kuOracle muUbuntu
Izvo zvaifanira kutarisirwa pamwe neanoparadza maitiro ayo Oracle anayo kune yemahara software.
Ini ndakazvimisikidza sebasa kuti ndione kuti PostgreSQL iri sei, zvakanaka ini handizive ... asi MySQL ndinoiona iri munjodzi zvakare.
Iyo MySQL ndeyeOracle chimwe chinhu chinoita kuti vhudzi rangu rimire pamagumo ¬_¬
kune zvakare MariaDB, iyo, maererano nezvandakaverenga, yakabva kure.
Ini ndinoda PostgreSQL asi kana iwe uchibva kuMySQL, chinhu chepedyo chiripo (uye zvakare chinoenderana zvizere, iri tsamba-ne-tsamba forogo) ndiMariaDB.
Ndicho chinhu chakaonekwa chichiuya kubva kuvhuraoffice, zano reOracle-rekudzivirira riri kuzivikanwa.
Ini ndinofunga Mysql ichatevera nhanho dzakafanana, imwe nzira inogona kuve PostgreSQL kana iyo yemahara vhezheni yeMysql yakagadzirwa nemugadziri wayo MariaDB.
Jose Vasquez akadaro
PostgresQL iri nani kupfuura mysql. Pese paunoda ini ndinokubatsira pane chero chaunoda cybercol@gmail.com
Pindura kuna Jose VASQUEZ
Ini ndinoshandisa openjdk mune debian uye pasina matambudziko, uye kune webhu kunyorera plugin inonzi icedtea, ese emahara mune yangu debian 100% yemahara
Kunge isina kutaurwa, ese akanaka pasi pezuva reDebian ...
Maonero eCanonical anoita kunge anopokana, chaizvo Mac-senge.Asi ini ndinovatsigira sezvo Java haina kusununguka izvozvi uye Vhura JDK yatove nekwaniso. Ndichiri kufunga kuti Canonical inoita zvisarudzo zvakavanzika kwazvo, asi isu tinofanirwa kununura chokwadi chekuti ivo vakaraira muumbozha uye zvakadzama zvavanofunga kuita uye kuti vachazviita sei, vachipihwa dzimwe nzira dzekushandisa uye kujekesa (sekuziva kwedu). Ivo chete vakashaya ruzivo rwekuti riini.
Ini ndinofunga kuti hauna kuverenga nyaya nenzira kwayo, kana kuti hauna kuzvinzwisisa:
"Oracle yakavhara rezinesi iro rakabvumidza mapato matatu kugovera macomputer avo eJava zvakasununguka"
Arthur molina akadaro
Pakukwiridzira kune vhezheni 7 pa win32, pakanga pasina kukwidziridzwa pane ubuntu. Ini ndaifanirwa kurodha pasi iyo jdk 7 kubva kuOracle peji uye ndiyo yandinoshandisa, ini ndakangoona kuti kune openjdk 7.
Pindura arturo molina
Zvakanaka, zvinoita sezvisina kunaka kwandiri kuti vavhara kodhi, asi zvinoita sekushata kwandiri kuti Sekuru Mako nevarume vavo vanotimanikidza kubvisa imwe chirongwa toshandisa imwe nekuti yakaiswa muzvidobi.
Aya ndiwo sarudzo chairo mumaonero angu, nekuda kwematambudziko ekuchengetedza anounzwa neJava, zvichipiwa hwakasimba uye hwakachengeteka hunhu hweGNU / Linux.
Zvino izvo hazvireve kuti haugone kurodha bhanari uye kurisanganisa ... kana kuti mumwe munhu anozviita uye oita PPA.
Chinhu chega ndechekuti haugone kuiisa neyakareruka-tora kuisa kana kukodzera kuisa
Man ndeyekuti newe haina kutaridzika zvakanaka chero nenzira ... kuzviisa pamusoro hazviise zvidzoreso »… huya paLOL !!!
Chinhu chakanaka pane zvese izvi ndechekuti kana zvirizvo, OpenJDK ichave nekukosha kwakakosha munguva pfupi iri kutevera 🙂
Pakupedzisira, yakanga yave ichiuya kwenguva yakareba zvekuti zvaiita kunge zvaisazoitika.
Ngatione, izvozvi openjdk inova chigadzirwa chepamutemo uye chionekwe chiri kukumikidza zvakanyanya kukuvandudza ikoko, hazvisi zvemumwe munhu kuti oracle yamira kugovera iyo jre XD ..
Pane chero munhu angapa gwara rekubvisa sunJDK nekuisa openJDK?
Pindura kuna Nimrod
Maitiro ekudzora ako Android mbozhanhare kubva kuPC yako